2019 နှစ်အတွက် ဆရာမင်းသုခ၏ ရာသီခွင်အလိုက် (1) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း | Love News
Home astrology 2019 နှစ်အတွက် ဆရာမင်းသုခ၏ ရာသီခွင်အလိုက် (1) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
2019 နှစ်အတွက် ဆရာမင်းသုခ၏ ရာသီခွင်အလိုက် (1) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
2019 နှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် (1) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း.
မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက် တစ်နှစ်စာ ရာသီခွင်အလိုက် ဟောစာတမ်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်များ…
မိတ်ဆွေများရဲ့ ဘဝအခက်အခဲ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို သေချာသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဆရာမင်းသုခကိုယ်တိုင် ရေးသားပြုစုပေး လိုက်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ဖတ်ရှုစေချင်ရင် like and share လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ မျှဝေပေးကြပါ။
2019 နှဈအတှကျ ရာသီခှငျအလိုကျ (1) နှဈစာ ဟောစာတမျး.
မိတျဆှအေားလုံးအတှကျ တဈနှဈစာ ရာသီခှငျအလိုကျ ဟောစာတမျးလေး တငျပေးလိုကျပါတယျ ခငျမြား…
မိတျဆှမြေားရဲ့ ဘဝအခကျအခဲ ကောငျးကြိုး ဆိုးကြိုးမြားကို သခြောသိရှိနိုငျစရေနျအတှကျ ဆရာမငျးသုခကိုယျတိုငျ ရေးသားပွုစုပေး လိုကျပါတယျ။ သငျတို့ရဲ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားကို ဖတျရှုစခေငျြရငျ like and share လုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ကူညီပါ မြှဝပေေးကွပါ။
မတ် (၂၁) မှ ဧပြီ (၂၀) အတွင်း မွေးဖွားသူများ
ဒီနှစ်မှာ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ စီစဉ်ထားသူများ စတင်သင့်ပြီး အစစအရာရာ အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စာချုပ်စာတမ်း ကိစ္စများ၊ အိမ်ခြံမြေ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ကိစ္စများလည်း ပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။ နေအိမ်နေရာထိုင်ခင်း အသစ်၊ လုပ်ငန်းနေရာအသစ်ပြောင်းရွှေ့ရကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေး သာယာနေပြီး သားသမီးကြောင့်လည်း ဂုဏ်တက်ရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူရှိပြီး သူတွေအနေနဲ့ နှစ်ဖက် မိဘ စကားပြောကြောင်းလမ်း ရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူ မရှိသေးသူတွေအနေနဲ့လည်း ချစ်သူ ရလာတတ်တဲ့ နှစ်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အစားမှားတတ်ပါတယ်။အတွင်းရောဂါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးရပါမည်။လေထိုး၊ လေအောင့်၊ လေနာ ဗိုက်ဝေဒနာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဖြစ်တက်ပါသည်။
ယတြာ – မွေးနေ့မှာ အိမ်အနီးရှိ ဘုရားသို့သွားပြီး ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပေးပါ။
မတျ (၂၁) မှ ဧပွီ (၂၀) အတှငျး မှေးဖှားသူမြား
ဒီနှဈမှာ လုပျငနျးတိုးခြဲ့ဖို့ စီစဉျထားသူမြား စတငျသငျ့ပွီး အစစအရာရာ အောငျမွငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ စာခြုပျစာတမျး ကိစ်စမြား၊ အိမျခွံမွေ လကျမှတျရေးထိုးခွငျး ကိစ်စမြားလညျး ပွုလုပျရတတျပါတယျ။ နအေိမျနရောထိုငျခငျး အသဈ၊ လုပျငနျးနရောအသဈပွောငျးရှရေ့ကိနျးလညျး ရှိနပေါတယျ။ အိမျတှငျးရေး သာယာနပွေီး သားသမီးကွောငျ့လညျး ဂုဏျတကျရတတျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာ ခဈြသူရှိပွီး သူတှအေနနေဲ့ နှဈဖကျ မိဘ စကားပွောကွောငျးလမျး ရတတျပါတယျ။ ခဈြသူ မရှိသေးသူတှအေနနေဲ့လညျး ခဈြသူ ရလာတတျတဲ့ နှဈပါပဲ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အစားမှားတတျပါတယျ။အတှငျးရောဂါနဲ့ ပကျသကျပွီး ဂရုစိုကျပေးရပါမညျ။လထေိုး၊ လအေောငျ့၊ လနော ဗိုကျဝဒေနာနဲ့ ပကျသကျပွီး ဖွဈတကျပါသညျ။
ယတွာ – မှေးနမှေ့ာ အိမျအနီးရှိ ဘုရားသို့သှားပွီး ရှသေင်ျကနျး ကပျလှူပေးပါ။
ဧပြီ (၂၁) မှ မေ (၂၁) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်လည် ဆုံဆည်းနိုင်မယ့် ကာလဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်း အပြောင်းအလဲကြားကပဲ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်ပြီး လူမျိုးခြား ကူညီမစမှု ရရှိပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းစပ်တူလုပ်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ အသည်းနှလုံးထက် ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်မှသာ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နီးစပ်မှုပေါ် မူတည်ပြီးလည်း အိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိနေပါတယ်။ ကံကောင်းနေပေမယ့် ၀ီရိယစိုက်ထုတ်မှု အားနည်းတာကြောင့် ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် ရာထူးတိုးတက်မှုပိုင်းမှာ နှောင့်နှေးနေ တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အဆုတ်အအေးပတ်တာ၊ သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါမျိုး ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – ကလေးငယ်တစ်ဦးအား ဘယာကြော် ၀ယ်ကျွေးလိုက်ပါ။
ဧပွီ (၂၁) မှ မေ (၂၁) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
ဝေးကှာနသေူတှနေဲ့ ပွနျလညျ ဆုံဆညျးနိုငျမယျ့ ကာလဖွဈပွီး အခကျအခဲတှကေိုလညျး ကြျောလှားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ လုပျငနျး အပွောငျးအလဲကွားကပဲ တိုးတကျမှုတှေ ရရှိလာနိုငျပွီး လူမြိုးခွား ကူညီမစမှု ရရှိပါလိမျ့မယျ။ စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျတှအေနနေဲ့ လုပျငနျးစပျတူလုပျခွငျးဖွငျ့ အောငျမွငျမှု ရရှိပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးမှာ အသညျးနှလုံးထကျ ဦးနှောကျကိုဦးစားပေးရှေးခယျြ ဆုံးဖွတျမှသာ အဆငျပွမှောဖွဈပါတယျ။ နီးစပျမှုပျေါ မူတညျပွီးလညျး အိမျထောငျကကြိနျး ရှိနပေါတယျ။ ကံကောငျးနပေမေယျ့ ဝီရိယစိုကျထုတျမှု အားနညျးတာကွောငျ့ ပညာရေး၊ လုပျငနျးခှငျ ရာထူးတိုးတကျမှုပိုငျးမှာ နှောငျ့နှေးနေ တတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အဆုတျအအေးပတျတာ၊ သှားနဲ့ပတျသကျတဲ့ ရောဂါမြိုး ဖွဈပှားတတျပါတယျ။
ယတွာ – ကလေးငယျတဈဦးအား ဘယာကွျော ဝယျကြှေးလိုကျပါ။
မေ (၂၂) မှ ဇွန်(၂၁) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်တွေမှာ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်လို့ သတိပြုရပါမယ်။ အိမ်ပြင်ရခြင်းမျိုးရှိပြီး အိမ်အသစ်သော်လည်းကောင်း ၀င်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ငွေဝင်နေပေမယ့် ငွေကုန်တဲ့နှုန်းကတော့ ၀င်တဲ့နှုန်းထက်များနေမယ့် ကာလပါပဲ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ များနေပါလိမ့်မယ်။ အစာအိမ် ၀မ်းဗိုက် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ အိမ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အို ဘိုးဘွားများရှိပါက ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းအသစ်တွေ တက်ရောက်ရကိန်းရှိပြီး ရာထူးတိုးကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ အချစ်ရေးပိုင်းမှာတော့ ကြားလူနှောင့်ယှက်လို့ ဝေးကွာရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေ အနေနဲ့လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – အိမ်ရှိ ဘုရားတွင် သစ္စာပန်း ကပ်လှူပေးပါ။
မေ (၂၂) မှ ဇှနျ(၂၁) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ်စရပျတှမှော အောကျလကျငယျသား ဒုက်ခပေးတတျလို့ သတိပွုရပါမယျ။ အိမျပွငျရခွငျးမြိုးရှိပွီး အိမျအသဈသျောလညျးကောငျး ဝငျတတျပါတယျ။ ပုံမှနျငှဝေငျနပေမေယျ့ ငှကေုနျတဲ့နှုနျးကတော့ ဝငျတဲ့နှုနျးထကျမြားနမေယျ့ ကာလပါပဲ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ငှကေုနျကွေးကြ မြားနပေါလိမျ့မယျ။ အစာအိမျ ဝမျးဗိုကျ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ အိမျတှငျ သကျကွီးရှယျအို ဘိုးဘှားမြားရှိပါက ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျပေးပါ။ ပညာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး သငျတနျးအသဈတှေ တကျရောကျရကိနျးရှိပွီး ရာထူးတိုးကိနျးလညျး ရှိနပေါတယျ။ အခဈြရေးပိုငျးမှာတော့ ကွားလူနှောငျ့ယှကျလို့ ဝေးကှာရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျသညျတှေ အနနေဲ့လညျး စိတျဝမျးကှဲပွီး ကတောကျကဆ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။
ယတွာ – အိမျရှိ ဘုရားတှငျ သစ်စာပနျး ကပျလှူပေးပါ။
ဇွန် (၂၂) မှ ဇူလိုင် (၂၂) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
လုပ်သလောက် နာမည် မရဖြစ်နေမယ့် ကာလပါပဲ။ ဒီနှစ်အတွင်း လုပ်သမျှ ကိစ္စရပ်တွေ အားလုံး အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းစပ်တူလုပ်ခြင်းမျိုးတွေကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ နေ့ရက်ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲ သူတစ်ပါးကို တဆင့် ခိုင်းစေထားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း သစ္စာဖောက်မှုခံရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာမခံပေးတာမျိုးရှောင်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးမှာလည်း သူတပါးကြားဝင်ရောက်မိလို့ အထင်လွဲခံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ဒူးနဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း ထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – ဘုရားစင် ရှင်းပေးပြီး ပန်းအဝါရောင် (၃)ပွင့်၊ အမွှေးတိုင် (၃)တိုင်၊ ထောပတ်ဆီမီးခွက် (၃)ခွက် ပူဇော်ပေးပါ။
ဇှနျ (၂၂) မှ ဇူလိုငျ (၂၂) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
လုပျသလောကျ နာမညျ မရဖွဈနမေယျ့ ကာလပါပဲ။ ဒီနှဈအတှငျး လုပျသမြှ ကိစ်စရပျတှေ အားလုံး အလှဲလှဲအခြျောခြျောဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ လုပျငနျးစပျတူလုပျခွငျးမြိုးတှကေိုလညျး ရှောငျကွဉျသငျ့တဲ့ နရေ့ကျပါပဲ။ ကိုယျတိုငျမလုပျဘဲ သူတဈပါးကို တဆငျ့ ခိုငျးစထေားတဲ့ ကိစ်စတှမှောလညျး သစ်စာဖောကျမှုခံရတတျပါတယျ။ ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျပွီး အာမခံပေးတာမြိုးရှောငျပါ။ အိမျထောငျရေး၊ အခဈြရေးမှာလညျး သူတပါးကွားဝငျရောကျမိလို့ အထငျလှဲခံရတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ ဒူးနဲ့ ခါးအောကျပိုငျး ထိခိုကျမိတတျပါတယျ။
ယတွာ – ဘုရားစငျ ရှငျးပေးပွီး ပနျးအဝါရောငျ (၃)ပှငျ့၊ အမှေးတိုငျ (၃)တိုငျ၊ ထောပတျဆီမီးခှကျ (၃)ခှကျ ပူဇျောပေးပါ။
ဇူလိုင် (၂၃) မှ သြဂုတ် (၂၃) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားနဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်တာကနေ အောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင် မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိပြီး အချစ်ရေးမှာ အထူးကံကောင်းနေပါတယ်။ သွားလေရာ ရောက်လေရာမှာ လူတိုင်းက မိမိအပေါ် လိုလားမှု ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အပြောင်းအလဲ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကြားကနေပဲ တိုးတက်အောင်မြင် ပါလိမ့်မယ်။ အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိပေမယ့် ကျော်လွှားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြံ၊ ကား၊ အိမ် အသစ်ဝင်ကိန်းရှိပြီး အိမ်ပြောင်းရကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့ရက်မှာ စိတ်ပျံ့လွင့်လွယ်ပြီး အချစ်ရေးမှာ နစ်မျောနေတာကြောင့် ပညာရေးပိုင်း အားနည်းတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – လမ်းတွင်တွေ့သော သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ဦးအား တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းပေးပါ။
ဇူလိုငျ (၂၃) မှ သွဂုတျ (၂၃) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
လူမြိုးခွား၊ ဘာသာခွားနဲ့ ဖကျစပျ လုပျကိုငျတာကနေ အောငျမွငျမှု ရရှိပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျ မရှိသူမြား အိမျထောငျကကြိနျးရှိပွီး အခဈြရေးမှာ အထူးကံကောငျးနပေါတယျ။ သှားလရော ရောကျလရောမှာ လူတိုငျးက မိမိအပျေါ လိုလားမှု ရှိနပေါလိမျ့မယျ။ အပွောငျးအလဲ၊ ယှဉျပွိုငျမှုတှကွေားကနပေဲ တိုးတကျအောငျမွငျ ပါလိမျ့မယျ။ အခကျအခဲ အနညျးငယျ ရှိပမေယျ့ ကြျောလှားနိုငျမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခွံ၊ ကား၊ အိမျ အသဈဝငျကိနျးရှိပွီး အိမျပွောငျးရကိနျးလညျး ရှိနပေါတယျ။ ဒီနရေ့ကျမှာ စိတျပြံ့လှငျ့လှယျပွီး အခဈြရေးမှာ နဈမြောနတောကွောငျ့ ပညာရေးပိုငျး အားနညျးတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အဆုတျရောဂါ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။
ယတွာ – လမျးတှငျတှသေ့ော သကျကွီးရှယျအို တဈဦးအား တတျနိုငျသမြှ လှူဒါနျးပေးပါ။
သြဂုတ် (၂၄) မှ စက်တင်ဘာ (၂၂) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
မနာလို ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ကြုံရကိန်း ရှိနေပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ရပ်တန့်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေပြန်လည် အကောင်အထည်ပေါ်လာမယ့် နေ့ရက်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသစ် စတင်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ သတိထားသင့်ပြီး ဒီနေ့မှာ အလုပ်ပြောင်း၊ အိမ်ပြောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်သေးပါဘူး။ ဘေးစကားတွေကြောင့် အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာဖြစ်နိုင်လို့ သတိပြုရမယ့် နေ့ရက်ပါပဲ။ အတတ်ပညာ တစ်ခုခု တိုးချဲ့သင်ယူရကိန်းရှိပြီး နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ် သွားရကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – အိမ်ရှိ ဘုရားတွင် ကျောက်ကျော ကပ်လှူပေးပါ။
သွဂုတျ (၂၄) မှ စကျတငျဘာ (၂၂) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
မနာလို ပွိုငျဆိုငျမှုမြား ကွုံရကိနျး ရှိနပွေီး လုပျငနျးခှငျမှာလညျး အနှောငျ့အယှကျပေးသူတှေ ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ ရပျတနျ့ထားတဲ့ ကိစ်စတှပွေနျလညျ အကောငျအထညျပျေါလာမယျ့ နရေ့ကျဖွဈပွီး လုပျငနျးသဈ စတငျဖို့ ကောငျးမှနျတဲ့ နှဈလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။ လူမြိုးကှဲ၊ ဘာသာကှဲနဲ့ တှဲဖကျလုပျကိုငျသူမြား သတိထားသငျ့ပွီး ဒီနမှေ့ာ အလုပျပွောငျး၊ အိမျပွောငျးတာမြိုးတှေ မလုပျသငျ့သေးပါဘူး။ ဘေးစကားတှကွေောငျ့ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး ပွဿနာဖွဈနိုငျလို့ သတိပွုရမယျ့ နရေ့ကျပါပဲ။ အတတျပညာ တဈခုခု တိုးခြဲ့သငျယူရကိနျးရှိပွီး နိုငျငံခွား ခရီးစဉျ သှားရကိနျးလညျး ရှိနပေါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ ဝမျးဗိုကျပိုငျးဆိုငျရာ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။
ယတွာ – အိမျရှိ ဘုရားတှငျ ကြောကျကြော ကပျလှူပေးပါ။
စက်တင်ဘာ (၂၃) မှ အောက်တိုဘာ (၂၃) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
လုပ်ငန်းကိစ္စ စပ်တူ လုပ်ကိုင်မှုတွေ ကနေ အကျိုးအမြတ် ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်ကိန်း ရှိပြီး အိမ်အနီးအနားမှာ နာရေးရှိရင် ထီပြေးထိုးလိုက်ပါ။ ကုန်သည်ပွဲစားများ အလုပ်အကိုင်ကောင်းနေမယ့် နေ့ရက်ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေ အိုးသစ်အိမ်သစ် ၀င်ကိန်းရှိနေပါတယ်။ ကြားကနေ အာမခံရတဲ့ လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားလိုက်ပါ။ အိမ်ထောင်သည်တွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့်ဂုဏ်တက်မယ့် ကာလပါပဲ။ သားသမီးတွေကြောင့်လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့ရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ ပျိုရွယ်သူတွေအနေနဲ့ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည် နေပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အာရုံကြောအားနည်းတတ်ပါတယ်။ယတြာ – အိမ်ရှိ ဘုရားတွင် ထန်းလျက်ကပ်လှူပေးပါ။
စကျတငျဘာ (၂၃) မှ အောကျတိုဘာ (၂၃) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
လုပျငနျးကိစ်စ စပျတူ လုပျကိုငျမှုတှေ ကနေ အကြိုးအမွတျ ရရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ထီပေါကျကိနျး ရှိပွီး အိမျအနီးအနားမှာ နာရေးရှိရငျ ထီပွေးထိုးလိုကျပါ။ ကုနျသညျပှဲစားမြား အလုပျအကိုငျကောငျးနမေယျ့ နရေ့ကျဖွဈပွီး အိမျခွံမွေ အိုးသဈအိမျသဈ ဝငျကိနျးရှိနပေါတယျ။ ကွားကနေ အာမခံရတဲ့ လုပျငနျး ကိစ်စရပျတှကေိုတော့ တတျနိုငျသမြှရှောငျရှားလိုကျပါ။ အိမျထောငျသညျတှအေနနေဲ့ အိမျထောငျဖကျရဲ့ အောငျမွငျမှုကွောငျ့ဂုဏျတကျမယျ့ ကာလပါပဲ။ သားသမီးတှကွေောငျ့လညျး စိတျခမျြးမွရေ့မယျ့ အခြိနျပါပဲ။ ပြိုရှယျသူတှအေနနေဲ့ ခဈြသူဝိုငျးဝိုငျးလညျ နပေါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အာရုံကွောအားနညျးတတျပါတယျ။
ယတွာ – အိမျရှိ ဘုရားတှငျ ထနျးလကျြကပျလှူပေးပါ။
အောက်တိုဘာ (၂၄) မှ နိုဝင်ဘာ (၂၂) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်တွေမှာ အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်သူက မကောင်းကြံမှုကြောင့် ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အိမ်တွင်းရေး အိမ်ထောင်ရေး ဆူပူနေမယ့် အချိန်ဖြစ်ပြီး အချစ်ရေးမှာလည်း ချစ်သူနဲ့ တကျက်ကျက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းအလဲ ရှိနေပြီး ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ အိမ်သစ်မှာ အပူသည်သော်လည်းကောင်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ကို ရပ်ဝေးက ဧည့်သည် ရောက်လာရင်တော့ သတင်းစကားကောင်း ပါလာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ မျက်စိတိမ်စွဲတာမျိုး ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – ဘုရားပန်း ရောင်စုံ (၂၇) ပွင့် ကပ်လှူပေးပါ။
အောကျတိုဘာ (၂၄) မှ နိုဝငျဘာ (၂၂) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
လုပျငနျး ကိစ်စရပျတှမှော အတူလကျတှဲ လုပျဆောငျသူက မကောငျးကွံမှုကွောငျ့ ပကျြစီးနိုငျပါတယျ။ ဒီနှဈမှာ ဘယျသူ့ကိုမှ မယုံတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အိမျတှငျးရေး အိမျထောငျရေး ဆူပူနမေယျ့ အခြိနျဖွဈပွီး အခဈြရေးမှာလညျး ခဈြသူနဲ့ တကကျြကကျြဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ နရောထိုငျခငျး အပွောငျးအလဲ ရှိနပွေီး ပွောငျးရှရေ့တဲ့ အိမျသဈမှာ အပူသညျသျောလညျးကောငျး ရှိနနေိုငျပါတယျ။ အိမျကို ရပျဝေးက ဧညျ့သညျ ရောကျလာရငျတော့ သတငျးစကားကောငျး ပါလာတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ မကျြစိတိမျစှဲတာမြိုး ဖွဈပှားတတျပါတယျ။
ယတွာ – ဘုရားပနျး ရောငျစုံ (၂၇) ပှငျ့ ကပျလှူပေးပါ။
နိုဝင်ဘာ (၂၃) မှ ဒီဇင်ဘာ (၂၁) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
ဒီနှစ်မှာ အရင်ရက်တွေက ကြန့်ကြာနေခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ အကုန်လုံး အောင်မြင်ပြီးမြောက် ပါလိမ့်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့ အကူအညီ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်အထက်အရာရှိရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရာထူးတိုးတက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ အောင်မြင်ခြင်းမျိုး ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ငွေအများအပြား ၀င်ကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး သာယာနေပြီး ချစ်သူမရှိသေးသူတွေလည်း ချစ်သူရလာတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး ကောင်းမွန်နေပြီး ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ လက်ထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်။
ယတြာ – အိမ်ရှိ ကြီးကဲသူတစ်ဦးအား သစ်သီးဖြင့် ကန်တော့လိုက်ပါ။
နိုဝငျဘာ (၂၃) မှ ဒီဇငျဘာ (၂၁) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
ဒီနှဈမှာ အရငျရကျတှကေ ကွနျ့ကွာနခေဲ့တဲ့ ကိစ်စတှေ အကုနျလုံး အောငျမွငျပွီးမွောကျ ပါလိမျ့မယျ။ အောကျလကျငယျသားတှရေဲ့ အကူအညီ ဒါမှမဟုတျ လုပျငနျးရှငျအထကျအရာရှိရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရာထူးတိုးတကျခွငျး၊ လုပျငနျးကိစ်စတှေ အောငျမွငျခွငျးမြိုး ရှိနနေိုငျပါတယျ။ ငှအေမြားအပွား ဝငျကိနျးလညျး ရှိနပေါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး သာယာနပွေီး ခဈြသူမရှိသေးသူတှလေညျး ခဈြသူရလာတတျပါတယျ။ ပညာရေး ကောငျးမှနျနပွေီး ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ လကျထိခိုကျမိတတျပါတယျ။
ယတွာ – အိမျရှိ ကွီးကဲသူတဈဦးအား သဈသီးဖွငျ့ ကနျတော့လိုကျပါ။
ဒီဇင်ဘာ (၂၂) မှ ဇန်နဝါရီ (၂၀) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
ဒီနှစ်မှာ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ စီစဉ်ထားရင် ခဏရပ် ထားလိုက်ပါဦး။ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းတွေကြောင့်လည်း ငွေကြေးဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ မိဘသို့မဟုတ် ကြီးကဲသူ တစ်ဦးဦးနဲ့ ရန်အကြီးအကျယ် ဖြစ်တတ်ပြီး အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေအနေနဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်မှုကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူရှိနေပေမယ့် တစ်ခြားသူ တစ်ဦးကို စိတ်ညွတ်နေတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးကတော့ ပုံမှန်ပဲ ရှိနေပါတယ်။
ယတြာ – အိမ်ရှိ ဘုရားတွင် သစ်ခွပန်း ကပ်လှူပေးပါ။
ဒီဇငျဘာ (၂၂) မှ ဇနျနဝါရီ (၂၀) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
ဒီနှဈမှာ လုပျငနျးတိုးခြဲ့ဖို့ စီစဉျထားရငျ ခဏရပျ ထားလိုကျပါဦး။ စပျတူရှယျယာ လုပျငနျးတှကွေောငျ့လညျး ငှကွေေးဆုံးရှုံးရတတျပါတယျ။ မိဘသို့မဟုတျ ကွီးကဲသူ တဈဦးဦးနဲ့ ရနျအကွီးအကယျြ ဖွဈတတျပွီး အိမျပျေါကနေ ဆငျးရတဲ့အထိ ဖွဈတတျပါတယျ။ အိမျထောငျသညျတှအေနနေဲ့ စိတျမထိနျးနိုငျမှုကွောငျ့ အိမျထောငျရေး ဖောကျပွနျမှုတှေ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူရှိနပေမေယျ့ တဈခွားသူ တဈဦးကို စိတျညှတျနတေတျပါတယျ။ ပညာရေး ၊ ကနျြးမာရေးကတော့ ပုံမှနျပဲ ရှိနပေါတယျ။
ယတွာ – အိမျရှိ ဘုရားတှငျ သဈခှပနျး ကပျလှူပေးပါ။
ဇန်န၀ါရီ (၂၁) မှ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၈) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
လုပ်ငန်းမှာ အကြီးအကဲတွေရဲ့ အထောက်အပံ့ ရရှိပြီး ရာထူးတိုး၊ နေရာပြောင်း ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ၀င်ငွေရပေါက်ရလမ်းများနေမယ့် ကာလဖြစ်ပြီး မိသားစုရဲ့ အကူအညီလည်း ရရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေနေပြီး ပျိုရွယ်သူတွေ စန်းပွင့်နေပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ ချစ်သူတွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး ဖူးစာရှင် အစစ်အမှန်ကိုလည်း ရွေးချယ်တွေ့ရှိ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကောင်းမွန် တိုးတက်နေမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းအသစ်တွေ တက်ရောက်ရကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ယတြာ – ဘုရားတွင် နေပူခံကျောက်ပြား၊ ကြွေပြား လှူဒါန်းပေးပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၉) မှ မတ် (၂၀) အတွင်းမွေးဖွားသူများ
ဒီနှစ်မှာ ကိုယ့်အပေါ် ယှဉ်ပြိုင်လိုသူတွေ ပေါများနေပြီး နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးမယ့်သူတွေလည်း များပြားနေ ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်တွင်းရေး အရှုတ်အရှင်းတွေကိုလည်း တွေ့ကြုံရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပြီး မိသားစုထဲက အငယ်ဆုံးသူတစ်ဦးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စ စီစဉ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်သလောက် ထွက်နေမယ့် ကာလဖြစ်ပြီး အစုစပ်လုပ်ငန်းနဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသာယာနေပြီး အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အတူ ခရီးထွက်ရကိန်းရှိနေပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ စန်းပွင့်နေမယ့် နေ့ရက်ပါပဲ။ ပညာရေးပိုင်းမှာ ကြီးကဲသူတစ်ဦးရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ လုပ်ငန်းရာထူး အဆင့်တိုးတက်နိုင်စေမယ့် သင်တန်းတွေ တက်ရောက်ရကိန်း ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အပူရှပ်တတ်ပါတယ်။
ယတြာ – ခိုစာကျွေးပေးပါ။
ဖဖေျောဝါရီ (၁၉) မှ မတျ (၂၀) အတှငျးမှေးဖှားသူမြား
ဒီနှဈမှာ ကိုယျ့အပျေါ ယှဉျပွိုငျလိုသူတှေ ပေါမြားနပွေီး နောကျကြောဓားနဲ့ ထိုးမယျ့သူတှလေညျး မြားပွားနေ ပါလိမျ့မယျ။ အိမျတှငျးရေး အရှုတျအရှငျးတှကေိုလညျး တှကွေုံ့ရမယျ့ အခြိနျဖွဈပွီး မိသားစုထဲက အငယျဆုံးသူတဈဦးရဲ့ အိမျထောငျရေး ကိစ်စ စီစဉျပေးရတတျပါတယျ။ ငှဝေငျသလောကျ ထှကျနမေယျ့ ကာလဖွဈပွီး အစုစပျလုပျငနျးနဲ့ လြှပျစဈ ပစ်စညျးဆိုငျရာလုပျငနျးလုပျကိုငျသူမြား ကောငျးမှနျနပေါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျသညျတှအေနနေဲ့ အိမျထောငျရေးသာယာနပွေီး အိမျထောငျဖကျနဲ့ အတူ ခရီးထှကျရကိနျးရှိနပေါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ စနျးပှငျ့နမေယျ့ နရေ့ကျပါပဲ။ ပညာရေးပိုငျးမှာ ကွီးကဲသူတဈဦးရဲ့ အထောကျအပံ့နဲ့ လုပျငနျးရာထူး အဆငျ့တိုးတကျနိုငျစမေယျ့ သငျတနျးတှေ တကျရောကျရကိနျး ရှိပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အပူရှပျတတျပါတယျ။
ယတွာ – ခိုစာကြှေးပေးပါ။
ဗေဒင် နှင့် လက္ခဏာ ဆရာမင်းသုခ
ဗဒေငျ နှငျ့ လက်ခဏာ ဆရာမငျးသုခ
Previous articleofficial တွဲနိုင်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး မတွေ့သေးခင် single အဖြစ်နေလိုက်ပါ..
Next articleပရိသတ်တွေကို လုံးဝကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေး (ရုပ်သံ)
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် ကြယ်မိုးများ ရွာမည်
​မွေး​နေ့အလိုက်​ မိမိအချစ်ရေး ကံကြမ္မာ
Ways to Respond When People Think You Are Uncaring
အိမ်ဖော်မိန်းကလေး အိပ်ပျော်နေတုန်း လက်တည့်စမ်းဖူးခဲ့တယ် လို့ သမ္မတ ဒူတာတေး ပြော
လေထုညစ်ညမ်းသည့် ဘန်ကောက်တွင် နှာခေါင်းစည်း ပြတ်လပ်သွားသဖြင့် ဘရာစီယာများကို သုံးနေရသည့် ဒေသခံများ
ချစ်သူကို ကွန်ဒုံး (၉၉၉) ဘူး နဲ့ Suprise လုပ်ပြီး လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့တဲ့ ကောင်လေး
ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s day) အတွက် သတိပေးစာ
ခြံအမှတ် ၅၄ ကို ပြတိုက်လုပ်ရန် ပြောဆိုနေမှုများ ဦးအောင်ဆန်းဦး လက်မခံ